ဒါပေမယ့်လည်း အင်းးးးးး ဟိုတစ်ယောက်တော့ ခေါင်းခေါက်တော့မယ်။။။။။
လူဆိုတာအချစ်နဲ့ အသက်ရှင်နေကြတယ်ဆိုတာတော့ ဦးကျောက်စ်ရေးတဲ့
Congratulation! ပါ။ အူးကျောက်စ်..
တဂယ်ဘာဗျာ.. အူးကျောက်စ်.. ကျော့်က သင်္ဘောသီးတွေထဲမှာ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင်
ဗဟုသုတအနည်းဆုံးသူဖြစ်ရို့.. သတို့သမီးအရံလေးတော့… ယုစ်လောက်တော့လုပ်လိုက်ပါနော့..
ကရင်စည်သွပ်… ခင်ဗျားလား ဗဟုသုတနည်းတာ…
ဟီ ဟိ ကျောက်စ်တို့ အိမ်နားမှာ
​နောက်​ထပ်​ တာဝန်​ရှိ ​ခေါင်းတစ်​လုံး​ခေါက်​ရန်​ အပ်​ပါ​ကြောင်းးး
ဟုတ်​ကဲ့ …. ဦး​ကျောက်​နဲ့ ထပ်​တူထပ်​မျှပါခင်​ဗျ
ခြေမှန်မှန်နဲ့ အနိုင်ဂိုးကို သွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်၊ နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို…
အဟမ်းးး အဟွတ် … အဟီးးးး
အောင်မြလေး.. ဖြစ်နေလိုက်တာ… ဒီမှာ ငအံ… အမွန်နဲ့နင် မတွေ့ခင် သူ့ပေါင်ပေါ်ထိုင်နေတာ ဘယ်သူမှတ်တုံး…. ……….. ………….. ………….. ……………… ………….. …………… …………….. ……………………. …………….. ………………. ……. …… …………………………
အခုမှပဲ အကြောင်းစုံကို ရှင်းတော့တယ်။ အဲလိုမှန်းသိရင် ဟိုနေ့က လိုက်နှောင့်ယှက်လိုက်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး သိရတော့ ၀မ်းသာလိုက်တာ။ မွန်မွန်ရေ… စိတ်တော့ဆိုးနဲ့နော်။ စတွေ့ကတည်းက ငြိမ်းက မွန်တို့နှစ်ယောက်ကို လိုက်တယ်ဆိုပြီး သဘောတူထားတာ။
ဟီ ဟိ သူတို့ ၂ယောက်ကို အရင်းပြုပြီး ရွာထဲမှာ ပို့စ်တင်လိုက်တာ…
နာ ပေါဒါ မလွန်ပါဝူး.. တစ်ရွာလုံး တူ့ဘက်ကပါလို့… ဟင့်..
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ပျော်လိုက်တာဗျာ ၊ အပျော်တွေရင်ထဲကူးတယ် ။
ဟိ ဖော်မယ် … အဲ့ကဗျာရဲ့ ဒုတိယအလုံးတွေဖတ်ပါရန်…
နာ့ အဲလို အဖြေပြန်ပေးတာတောင် ပိန်းတယ်လို့ ပြောပါတယ်ဆိုပြီး စိတ်ဆိုးနေဦးမှာ။ :mrgreenn:
နာ အဖြေတောင်းထားတဲ့သူများ ရှင်းရှင်းပေးကြပါနော်။
ခုခိ ခုခိ :mrgreenn:
ဒင်း ပိန်းချက်ကတော့ ရပ်သိရွာသိ ပဲ။
အောင်မာ .. အောင်မာ ..
အောင်မငီးဟဲ့ ….ကျောက်စ် ..တားတားကိုလဲရှာပေးပါဂျာ …ကောင်မလေးလန်းလန်းလေး တစ်ယောက်လောက်….အဟိဟိ
ချစ်တီးမကြီးဖြူဖွေး၏ အနောက်မှနေ၍ ယောင်းမဖြင့်ခေါက်သံ
အခုမှပဲ အနက်ဖွင့်ကို သိတော့တယ်။
ငှါးမည့်သူကားးးး မရှိ
ငှါး မဲ့ သူရှိသော် ငြားလည်း ကျန်းမာရေးက မကောင်းးးးး
ဒေါ်ဖွားမေထက် လှတာလေး တျောက်လောက်
ကိုင်း… ၂ – နှစ် ပြည့်ပြီဗျား…
နှစ်ကိုယ်တူအမြန်နီးဖို့အရေး ကြိုးစားကြပါလို့… ခွိ
တွေးမိတိုင်း ဦးလေးကို ထိုင်ကန်တော့ချင်ပါတယ်ဆို..
သားသားကိုလည်း ရှာပေးပါ ၊ စူပါဝင်းမှာပြုစုပါ့မယ် ၊
စိတ်ချ… ရှာပေးမယ် ကိုမြိုး…
မြေးချီချင်နေဘီလား… စောပါသေးတယ်ဗျ… ဟီ ဟိ
မရှာပေးရင် ခင်ဗျားလျို့ဝှက်ချက်တွေ ဖွင့်ချလိုက်မှာနော်
မီလုပ်ပါနဲ့ ဆြာမြိုးရယ်… ရှာဆိုရှာပေးပါ့မယ်… ခွိ
စကားမစပ် ဟိုစကီလေး ဘယ်ရောက်တွားဒုန်း… အားဟိ
သများ အသက် ၃၀ မတိုင်ခင် စားရမယ် . ခု အသက် မမေးကြေး ဟိဟိ